Ngenyanga edlule bengilokhu ngihlanza amashumi ezinkulungwane zama-akhawunti ebengikulandela ku-Twitter. Bengilandela cishe ama-akhawunti angama-30k, kepha ngikuhlunge lokho ngaya ngaphansi kuka-5k futhi ngiyaqhubeka nokukuhlanza. Njengoba ngilahle ama-akhawunti e-spammy, lawo ma-akhawunti ayekile ukungilandela… okwenza ukuthi okulandelayo kwami ​​kunciphe.
Ngiyeke ukulandela abangane abaningi ngengozi futhi ngabamba usizi ngakho. Uma ngingakulandelanga - vele ungishiyele inothi bese ngiyakulandela… bekungeyona into eyimfihlo. Ngimane ngalandela abanye abantu ngengozi. Noma kunjalo, buyela ku-Infographic! UTwiend uhlanganise leli phepha lokuthi ungakhulisa kanjani okulandelayo kwe-twitter futhi lihle futhi libanzi.
Engikuthanda kakhulu ngalesi seluleko ukuthi iseluleko esiqinile sokukhulisa okulandelayo okufanele. Uma uyothenga abalandeli kusuka kwenye indawo, ungahle ube nezinombolo eziphakeme, kepha uzogcwala ugaxekile. I-Twitter ibisebenza kanzima ukukhulisa izinombolo zazo kangangoba uhlelo selubola ukusuka ngaphakathi luye ngaphandle ngogaxekile. Okusobala ukuthi ukwehluleka ukungalandeli abantu abaningi. I-Twitter ayikuvumeli… kepha abanankinga uma ulandela ngobuningi. Lokho kuyisimungulu. Ukube i-Twitter izosebenza ngekhwalithi yokuqukethwe epulatifomu yayo futhi isuse abaduni - ikhwalithi ibizothuthuka futhi abantu abaningi bangakhangwa epulatifomu.